UKUHLAZIYA NOKUZONWABISA NGOKUGQIBILEYO- Abasebenzi abazizigidi
ISIMEMO NOKUZONWABISA NGOKUGQIBELEYO
Ukuqinisekisa ngesigqibo esinolwazi
Ukuqinisekisa ukuqhubeka kweshishini
Ukuqinisekisa ubomi obude
Kunqanda amadabi asemthethweni
Ukuthintela ukulahleka kwemali
Ukufikelela kwangoko kwiminyaka yamava
Ukuthobela kwethu kunye namaqela akhutheleyo kwihlabathi liphela kunobungcali obukhulu kwi-accounting, kwiirhafu, kuqoqosho nakwithiyori yokuxabisa, ngenkuthalo. Ngokubaluleke kakhulu, sinamava asebenzayo kunye nolondolozo lweshishini oluyimfuneko ukukhangela imiba kwinkampani ethile kunye namanqanaba athile emveliso kunye nokuvavanya izinto ezikhoyo kwihlabathi jikelele eziqhuba amaxabiso eshishini.
Sisebenza ngokusondeleleneyo nabaxumi kunye nabacebisi ukuphuhlisa iinjongo, ukuthobela ngokuzimeleyo kunye nokukhuthala okulungiselelwe ukufikelela kwiimfuno zomthengi. Sinikezela ngeengxelo ezenzelwe ukumelana nokugxothwa kwabasemagunyeni zerhafu, abaphicothi zincwadi, iinkundla, abalamli kunye nabanye abanomdla.
Ngaphakathi, ngommandla owandayo wolawulo kunye nezithintelo zomthetho kunye nemigaqo, amashishini abandakanyeka kwimisebenzi yokuhlengahlengisa, ukuhlanganisa kunye nokufumana, ukuqala, iiprojekthi ezinkulu, izabelo ezijikelezayo, ukuthunyelwa kwempahla kumazwe angaphandle, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kunye nokungenisa elizweni konke ukujongana nemingeni eyahlukeneyo kunye nokuthintela ukuthintela iindlela emnqamlezweni. -Umda wokuhamba kwabasebenzi, ukusekwa kwamashishini, ukwandiswa kwanokuzinza kunye nokusinda. Abasebenzi abasisigidi banikezela isikhokelo nenkxaso kwiinkampani zabo bonke ubungakanani bokuthotyelwa kunye nokukhuthala elifanelekileyo.
Ukuhlanganiswa kunye nokufunyanwa kunye nohlengahlengiso lwendibaniselwano
Uhlalutyo xa kudityaniswa kunye nokuthengwa kwezinto, ukuphuculwa komgangatho kunye nolunye uhlobo lwemisebenzi yokuhlengahlengiswa komgangatho kugxilwe “kumfanekiso omkhulu” kunye nokunciphisa umngcipheko wezezimali-uhlala ujonga indawo ebalulekileyo yokuthobela. Utshintsho lwendibaniselwano ngaphandle kokuqwalaselwa okwaneleyo kwefuthe lokufudukela kwelinye ilizwe kungakhokelela kwiziphumo ezibi kubasebenzi ababalulekileyo kunye nempumelelo yokudibana. Isigidi sabenzi bencedisa amashishini ukuhambisa indlela ezinxulumene nezinto zokufudukela kwelinye ilizwe ezinxulumene nezinto ezenziwa ngokudibeneyo kwiminyaka engamashumi. Uphando lwethu ngenkuthalo lubandakanya uhlalutyo oluqinisekileyo lokufudukela kwelinye ilizwe, ukumiselwa kwempembelelo kunye nolawulo lwemisebenzi eyimfuneko yokufuduka.
Iinkampani kwihlabathi jikelele zihlala zifuna intshukumo enye ngaxeshanye ukuya kumakhulu abasebenzi, ehambisa imiceli mingeni esekwe kwinani labasebenzi, iindima zabo kunye neziqinisekiso, nakumazwe abandakanyekayo. Singasebenzisana nawe kwimisebenzi yeeprojekthi ukubonelela ngesikhokelo sokugcina ukuthotyelwa kwemigaqo yeenkqubo zokufudukela kwalapha ekhaya. Ngokusebenzisana nawe, sinokwakha izicwangciso zokwenza ngokwesiko ngokuhambelana nezinto eziphambili ngokubaluleka kunye nezinto ekujolise kuzo, ukukunceda uhlale usempondweni kwaye ufezekise iinjongo zakho zeprojekthi.